GOORTA UU FUMAAYO SHIRKA MAAMUL U SEMEYNTA JUBOOYINKA EE JUBALAND
Loading...	Home Wararka GOORTA UU FUMAAYO SHIRKA MAAMUL U SEMEYNTA JUBOOYINKA EE JUBALAND
GOORTA UU FUMAAYO SHIRKA MAAMUL U SEMEYNTA JUBOOYINKA EE JUBALAND	Monday, 11 February 2013 19:05	Shirweynaha maamul u sameynta Jubbooyinka ayaa si rasmi ah uga furmi doona magaalada Kismaayo Sabti, Febraayo 23-keeda, sida uu shaaciyay guddiga farsamada ee u xil saaran dhisidda maamulka Jubbaland.
Guddiga farsamada ayaa sheegay in ergo kor u dhaafeysa 500 oo xubnood oo ka kala socota dowladda Soomaaliya, urur goboleedka IGAD iyo dadka deegaanka lagu wado inay ka qeyb-galaan shirweynaha ka furmaya magaalada Kismaayo.
Isagoo ka hadlayay shir jaraa’id oo lagu qabtay Kismaayo, guddoomiyaha guddiga farsamada Macallin Ibraahim Maxamed ayaa maanta sheegay in shirka uu noqon doono isku daygii ugu dambeeyay ee maamul goboleed loogu sameynayo shacabka ku dhaqan gobollada Jubbooyinka iyo Gedo.
Xubno ka tirsan guddiga ayaa rajo ka muujiyay inuu mira-dhal noqon doono shirka.
Tan iyo markii al-Shabaab laga saaray magaalada Kismaayo dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay, waxaa socday dadaallo maamul goboleed loogu dhisayo dadka ku dhaqan gobollada Jubbooyinka iyo Gedo.
Guddiga farsamada oo ka kooban 25 xubnood ayaa magaalada Kismaayo gaaray Sabtidii la soo dhaafay si uu u fududeeyo howsha qabsoomidda shirweynaha.
Comments (1)	Maxamed cabdi shiiqaalow	1
Wednesday, 13 February 2013 22:50	Maxamed cabdi shiiqaalow	Anigo ah maxamed cabdi shiiqaalow marka hore waxa salamaya aqayarta websitka anigo uu hadlayo besha shiiqaal wadanka holland utrecht waxa digniin uu jedina axmed madobe kismayo ma uu samen karo mamul deganada besha shiiqaal ay ledahay ha ka fisado hadi kale dagal ayan ka xigna wabilahi towfiiq